Nagala Soo Xiriir | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Nala soo xiriir Context link
Hel qorshaha caymiska ee saxda ah ee la idin kugu talagalay adiga ama qof kale Context link
Ka jawaab dhawr su'aalood oo fudud si aad u hesho qorshaha saxda ah Context link
Su'aalaha Medicaid ama Barnaamijka Caymiska Caafimaadka Carruurta (CHIP)?
Ma u baahan tahay macluumaad ku saabsan qorshooyinkayaga Labada Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah ee loogu talagalay dadka haysta Medicaid iyo Medicare? Kala xiriir UnitedHealthcare telefoonka, onlaynka ama boostada.
Horay ma u ahayd xubin? Wac telefoonka ku yaala gadaasha kaarkaaga aqoonsiga (ID).
La kulan wakiil Context link
Buuxifoomka soo socdaoo Wakiilka Iibka UnitedHealthcare ayaa kula soo xiriiri doona.
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 04.18.2022 waqtiga 11:39 SUBAXNIMO CDT